कम्युनिष्ट नेताको करोडौको सम्पति : काठमाडौँ मै २३ आना जग्गामा आलिसान घर
हाल उपप्रधानमन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेल तत्कालीन नेकपा मालेमा रहँदा ०४४ सालताका भूमिगत थिए । भूमिगत छँदै पोखरेलले केन्द्रीय समितिको एउटा बैठकमा काठमाडौंको कोटेश्वरमा आफ्नो घडेरी रहेको बताए । पोखरेलको यसबेला काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ मा २३ आना जग्गामा बनेको तीन तले घर छ ।
धापासीको घर जग्गा उनकी श्रीमती मिरा ध्वंजु पोखरेलका नाममा छ । पोखरेल आफैंले भरेको सम्पत्ति विवरण फारममा पैत्रिक सम्पत्तिबापत पाएको झापाको चन्द्रगढीको १२ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । भक्तपुरको नगरकोटमा १ रोपनी ११ आना जग्गा श्रीमती ध्वंजुलाई माइतीले दिएको र धादिङको खानीखोलामा श्रीमतीकै नाममा ४ रोपनी जग्गा रहेको पनि उनले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिए । यसलगत्तै पोखरेललाई पक्राउ गरेर राजबिराज जेलको हिरासतमा राखियो । त्यतिखेर धुम्बाराहीस्थित पोखरेलको त्यही घरको पानी ट्याङकीमा पैसाको बिटा भेटिएको प्रचार उनकै पार्टीले गरेको थियो ।
धादिङ खानीखोलाको जग्गा पारिश्रमिक, जमिन बिक्री र ऋणबाट खरिद गरेको दावी पोखरेलको छ । काठमाडौं–४ धुम्बाराहीको घर–जग्गा बिक्री र बैंकबाट ऋण लिएर धापासीको घर–जग्गा जोडेको पोखरेलले सम्पति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । धुम्बाराहीस्थित शंकपार्कछेउमा करिब ४ आना पुग–नपुग जग्गामा पोखरेलको घर थियो । त्यही घरमा उनले वर्षौ बिताए । १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिए । यसलगत्तै पोखरेललाई पक्राउ गरेर राजबिराज जेलको हिरासतमा राखियो । त्यतिखेर धुम्बाराहीस्थित पोखरेलको त्यही घरको पानी ट्याङकीमा पैसाको बिटा भेटिएको प्रचार उनकै पार्टीले गरेको थियो ।
बरुण हाइड्रोमा उनको १० हजार कित्ता सेयर छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकमा २ सय कित्ता र मोर्डन कन्या मल्टिपल कलेजमा ५ हजार कित्ता सेयर छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंकमा पनि पोखरेल दम्पतिको ठूलै मात्रामा नगद मौज्जाद छ । पोखरेलकी श्रीमती ध्वंजु प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । उनी तत्कालीन नेकपा मालेको भूमिगत कार्यकर्ता पनि थिइन । उनी असार ०६१ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भए । त्यसपछि जेठ ०६८ मा १२ दिन उपप्रधानमन्त्री भए । पोखरेल लामो समय मन्त्री भएको फागुन ०७४ पछि यसबेलासम्म मात्र हो ।
‘निर्मलाका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ’
चीनको निर्यातमा व्यापक सुधार, एक दशकमै सबैभन्दा बढी
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन काँग्रेसको माग : संसद अवरुद्ध
समयमै काम नहुँदा दिनहुँ वडा धाउँदै
प्रचण्ड-माधब पक्षधर निस्केर हिंडे : कांग्रेस र जसपा नाराबाजी गर्दै, ओली पक्ष हेर्दै
महलपोखरीमा सामुदायिक घरबास सञ्चालन हुँदै
सर्वोच्चको फैसलासंगै ओली स्वत: अल्पमतमा
अदालतले देखायो 'न्यायिक सक्रियता' : मागभन्दा पर गएर फैसला !
गलत औषधिले माछा मरेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग
ओलीले बोलाए संसदीय दलको बैठक
Copyright ©2021 All Rights Reserved Kantipath.com